Haody : mpianatra mahafapo (NewsMada) | AEMW
Haody : mpianatra mahafapo (NewsMada)
Mihaino… Mampihatra avy hatrany ! Mpianatra mahafapo ny zaza sy ny ankizy. Vao henoiny indray mandeha ny hira, mby ao an-tsainy, aloaka ny vavany avy eo. Midika izany fa mpanabe ary tsy afa-miala amin’ny maha mpanabe azy izay ny mpanakanto sy ny mpanapariaka ny kanto toy ny haino aman-jery.
Mahatazona izay adidy goavana eo an-dolohany izay ve ireo sehatra roa ireo ? Hatreto aloha, tsia ny valiny. Samy minia tsy mahalala io adidy io ny sasany amin’ny mpanakanto sy ny mpikirakira haino aman-jery.
… Sao mba tokony hanaovana fanentanana manokana izy ireo ? Andraikitr’iza anefa ny hanao izany ? Fampahatsiahivana ihany, angamba, no tokony hatao fa ny andraikitra sy ny adidy anjaran’ny tsirairay ny manatanteraka izany.
← Sambasamba… : hiaka-tsehatra indray i Balita (NewsMada)
Fanabeazana maha olona : misy fiantraikany amin’ny toe-tsaina ny mozika henoina (NewsMada) →